FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA GOLDEN PYRENEES - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Golden Pyrenees
Alika mifangaro volamena / Pyrenees lehibe mifangaro
'Ity no Pyrenees volamena, Saige. Tokony ho 7 taona izy, ary manana endrika mahafinaritra indrindra amin'ny Golden, mangataka biby fiompy foana ary mikarakara ny ahy Chihuahua toy ny alika kely. 'Niaro' ny tranonay tamin'ny alàlan'ny fihoaran'ny zava-drehetra izy, na amin'ny alina aza. Miaraka amin'ny volony rehetra, dia mafana be izy ary tia matory amin'ny tany eo akaikin'ny ventinay. Ny mandeha an-tongotra no tena ankafiziny eran'izao tontolo izao, indrindra ireo tsy matanjaka. Tsy ampy ny dia an-tongotra. Nanafaka azy tamin'ny tranony voalohany izahay, izay nipetrahany tany ivelany niaraka tamin'ny anadahiny nandritra ny androm-piainany. Tsy navela niditra mihitsy izy, ka izao dia nanaiky fanahiana ary raiki-tahotra ny oram-baratra. Ankehitriny izy dia miara-mipetraka amintsika, ny maka fatoriana amin'ny fandriana sy ny fandriana no iray amin'ireo fotoana lasa tiany. Tsy nampianarina haka azy mihitsy izy, fa mijery ny alikanay kely ary milalao miaraka aminay indraindray. Tian'i Saige ny milelaka ny rantsan-tanan'ny ankizy kely ary mijoro tsara ho biby foana. ' —Nampindram-bola an'i Robin Houck (Teneyes)
ny fomba hikarakarana alikakely 3 herinandro
Ny alika Golden Pyrenees dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Golden Retriever ary ny Pyrenees mahafinaritra . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
American Canine Hybrid Club = Pyrenees volamena
Drafitra mpamorona endrika = Pyranees volamena
Designer Dogs Kennel Club = Pyrenees volamena
Mpanoratra International Canine Registry®= Pyrenees volamena
'Salama, ity dia iray amin'ireo alikako antsoina hoe Charlie He dia Pyrenees volamena. Teraka tamin'ny faran'ny volana janoary 2008 tany Saskatchewan izy. Alika milamina sy mora mandeha ary sariaka be i Charlie. Ny sakaizako akaiky indrindra dia ny zanako lahy 12 taona, izy ireo no lalao mety indrindra. Manana toetra a Pyrenees mahafinaritra tiany ny mijery izao tontolo izao mandalo, fa rehefa any ivelany milalao baolina izy dia malemy fanahy toa an Golden Retriever . Tsy alika mavitrika be i Charlie. Mandeha any amin'ny zaridaina alika im-betsaka araka izay azontsika atao amin'ny ririnina ary amin'ny ankamaroan'ny andro amin'ny fahavaratra dia mihazakazaka mandritra ny 30 minitra izy avy eo ary mijery an'i Neny sy dadany hody. Mipetraka miaraka amin'i Charlie saka roa fa mifanaraka tsara izy, iray MENARANA , ary roa Androany tsara antsoina hoe Stella (fotsy Dane izy marenina ) sy Dexter, akanjo lava Dane izay tonga taminay tamin'ny volana Janoary 2010. Nampiofana ny alikako tamin'ny alàlan'i Cesar Millan sy Brad Pattison, mpampiantrano ny 'At the End of My Leash.' Ny seho sy ny boky dia samy nanampy ahy sy ny fianakaviako hanana fonosana milamina miaraka amin'ny olombelona rehetra amin'ny maha-mpitarika azy ireo. Manana tontolo feno fankasitrahana aho roa. Raha tsy fantatro ny toro-hevitra momba ny fiofanana izay nianarako ny tranoko dia toerana mampatahotra fitsidihana sy honenana. '
Charlie the Pyrenees volamena maka hatory amin'ny tany
Lucy the Golden Pyrenees (Great Pyrenees / Golden Retriever mix)
'Ity ny alikako Luke amin'ny faha-6 taonany. Izy dia Pyrenees volamena izay hitanay tao amin'ny toeram-pialokalofana teo an-toerana any NC. Mamy tokoa izy ary malaza eo amin'ny manodidina anay satria tia azy ny olon-drehetra. Rehefa nahita azy aho dia 40 pounds teo amin'ny 1,5 taona. Mpirenireny izy nandritra izay 1.5 taona izay ary tsy nihinan-kanina mihitsy. Rehefa nentinay niditra izy dia tsy hitany izay hatao amin'ny tohatra ka tsy maintsy entiko miakatra sy midina amin'ny tohatra izy hampianatra azy. Andao lazaina fa efa namelana izy hatramin'ny nitondrantsika azy nody, ary milanja 110 kilao izy izao. Izy no alika tsara indrindra nananantsika ary tena hanome sosokevitra ny hybrid azy. Tsy manana taolana ratsy ao amin'ny vatany. '
'Fen dia iraika ambin'ny folo herinandro Pyrenees mahafinaritra / Golden Retriever afangaro izay novonjenay avy tamin'ny toeram-pialokalofanay. Izy no sarin'ireo karazany roa izay tena hainy tsara amin'ny ankizy, na dia mbola kely aza izy, malefaka, manan-tsaina ary kamo. Milanja 30 kilao amin'ireo sary ireo izy ary mihalehibe isan'andro. '
Fen the Golden Pyrenees toy ny alika kely amin'ny 11 herinandro mandry ao anaty ahitra
rhodesian ridgeback sy alemà mpiandry ondry Mix
'Fen dia ankehitriny 6,5 volana sy 70 pounds. Ny palitaony dia manana endrika volamena, saingy tsy feno toy ny Pyrenees. Izy dia manana haavo ambany dia ambany tokoa 20-minitra mandeha 20 minitra isan'andro dia ampy ho azy. Izy dia mihinana kaopy roa isan'andro ary mitazona lanjany tena mahasalama. Ny mpitsabo biby dia manantena azy fa eo amin'ny 115-120 pounds eo ho eo amin'ny maha olon-dehibe azy izay misy vinavinaina 30 in.
'Manana ny fiarovana ny Pyrenees izy, alika mpiambina tsara. Nahazatra tsara izy hatreto ary tena mahay mitaky asa. Mifanaraka tsara amin'ny olona sy toe-javatra vaovao i Fen, ary miasa amin'izao fotoana izao hahazoana ny fanamarinana Canine Good Citizen. '
Fen the Golden Pyrenees toy ny alika kely amin'ny 6 1/2 volana mipetraka eo akaikin'ny hazo Christmast
Fen the Golden Pyrenees toy ny alika kely amin'ny 6 1/2 volana mandeha mitaingina fiara
jack russell shih tzu alika kely
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ireo Pyrenees volamena
Sary Pyrenees volamena 1
Lisitry ny alika mena mifangaro Pyrenees lehibe
dane mahafinaritra afangaro amin'ny husky
Tri miloko Cocker spaniel alika kely
Bulldog amerikana 3 volana
alika kely rhodesiana ridgeback afangaro alika kely
retriever miharo volamena lehibe Pyrénées